ကောင်းမှုတစ်ခု နေ့စဉ်ပြု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ကောင်းမှုတစ်ခု နေ့စဉ်ပြု
Posted by manawphyulay on Jul 16, 2010 in Community & Society, Creative Writing, Drama, Essays.., Myanma News, News, Relationships & Family, Society & Lifestyle | 11 comments
ကျွန်မ ဒီခေါင်းစဉ်လေးကို ဘာလို့ ပေးသလဲဆိုတော့ အဘွားရှိစဉ် ကျွန်မငယ်ငယ်ကလေးကတည်းက ပြောဆိုခဲ့ဖူးတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းလေးကြောင့်ပါပဲ။ သမီး လူရယ်လို ဖြစ်လာရင် နေ့စဉ် ကောင်းမှုတစ်ခုခုကို လုပ်ရမယ်တဲ့။ လူတိုင်း လောဘ မောဟတွေနဲ့ မကင်းရပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဘွားက အများကြီး မလုပ်ခိုင်းပဲနဲ့ သေးသေးမွှားမွှားကနေ ကြီးကြီးမားမားထိအောင် နေ့စဉ် ကောင်းမှုတစ်ခုတော့ လုပ်ပါလို့ သွန်သင်ဆုံးမခဲ့ပါတယ်။ အဘွားမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းလည်း အဘွားရှိစဉ်ကဲ့သို့ သမီး ကောင်းမှုတွေ ဆက်တိုက်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခုလည်း ဒီကနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့ အများသူငှာ နားရက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ကျွန်မအတွက်တော့ မွေးဖွားခဲ့ပြီးချိန်ကနေ ဒီကနေ့ထိ နားရက်ဆိုတာ တစ်ခါဖူးမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ နေပျော်တယ်။ ဒီနေ့ဆို ပိုပြီး ကြည်နူးဝမ်းသာစိတ်ဖြစ်မိတယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ ဖြည့်ဆည်းချင်တဲ့စိတ် နောက်တစ်ချက်က ပရဟိတအလုပ်တွေကို နာဂစ်ပြီး နောက်ပိုင်း အတော်များများ လုပ်ခဲ့မိပါတယ်။ ခု ဒီနေ့က ကျွန်မ ဆိုက်တွေလည်ပြီး စာဖတ်ရင်းနဲ့ ဆိုက်တစ်ဆိုက်ကို ရောက်ခဲ့ခြင်းကနေ စခဲ့တယ်ဆိုရမှာပေါ့။
# ပုံနှိပ်စာအုပ် (တတိယတန်း – သိပ္ပံ)၊
# ဗလာစာအုပ်၊ ဘောလ်ပင်၊ ခဲတံ၊ ခဲဖျက် . . . အစရှိသော စာရေးကိရိယာပစ္စည်းများ၊
# ခြင်ထောင် (ဆိုဒ်ကြီး)၊
# ဖျာကြမ်း (တစ်ဖက်ချော)၊
# တံမြတ်စည်း (အချော)၊
# ပလတ်စတစ် ဂေါ်ပြား၊
# ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ
# ပဲကြာဇံ . . .
သင်လည်း သာဓုခေါ်နိုင်စေ…။ ။
ရှိပြီးတဲ့ လူတွေကိုပဲ လှူနေတာထက်စာရင်
မရှိတဲ့ လူကိုလှူတာက နာမည်တော့မရပေမဲ့ ပိုပြီး ကုသိုလ်ရမှာပါ
မိဘမဲ့ကျောင်းများ နှစ်လတစ်ကြိမ် သွားရောက် ကုသိုလ်ယူနေပါသည်။ လှူဒါန်းချင်သူများ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ရှင်…..
ပြည့်နေတဲ့အိုးထဲကိုရေထပ်ထည့်မယ်.အစား မပြည့်သောအိုးကို ဖြည့်တာ
လိုအပ်သောနေရာကို ဖြည့်ပေးတာ ပိုသဘာဝကျပါတယ်။
အခုလို လိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးကို သိသူတွေကလဲ သတင်းပေးသင့်ပါတယ်။
အကျိုးရှိတဲ့ အလုပ်လေးပါ ဗျာ လို.အပ်နေတဲ့ အလှူလေးပါ ဒီထက်မက
လူတိုင်းလူတိုင်း ရင်ထဲမှာ မေတ္တာတရား ထားနိုင်ကြပါပြီး ပရဟိတအလုပ်လေးတွေကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်နိုင်ကြမယ်လို့ မနော မျှော်လင့်နေမိပါတယ်။
အမြင်ကတ်ပုဒ်မနဲ့ အနီတွေ လာပေးထားပြန်ပြီထင်တယ်။ ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ.. အလှူပြုတာတောင် အကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူကရှိသေးဆိုသလိုပေါ့လေ.. အားမပေးတဲ့သဘောလား။
ကောင်းမူတစ်ခု နေုစဉ်ပြု ကောင်ကျိုးချမ်းသာ အဖြာဖြာဧကန်ရမည်သာ။သာဓု..သာဓု…သာဓု
တကယ်လိုအပ်တဲ့ နေရာမှာလှူတန်းရတာ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရော၊ အလှူရှင်ပါ အင်မတန်အကျိုးရှိလှပါတယ်။အများအကျိုးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဗျာ….ဆက်သွယ်လှူတန်းလိုပါသည်။
ကောင်းမှုတစ်ခု နေ့စဉ် ပြု။
ကောင်းမှု တစ်ခု မက နေ့စဉ် ပြု။
အတိုင်းထက် အလွန်ပေါ့ရှင်။ ကုသိုလ်တရားဆိုတာ အစဉ်အမြဲပြုနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ကလေးတွေကြားထဲမှာ မ မနောကိုတွေ့တယ် ..
မမမနောရဲ့ ကောင်းမှု ကုသိုလ်က မွန်မြတ်ပါပေတယ်။
ဒါနဲ့ လေ အနီမှတ်တွေ များနေသလားလို့ ပါ။ဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ။